Carbondale, IL • Body Mass sy NuRu Massage
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fanosotra vatana any Carbondale, IL.
Carbondale dia tanàna iray ao amin'ny County Jackson, Illinois, Etazonia, ao anatin'ny faritra atsimon'i Illinois izay fantatra amin'ny anarana hoe "Little Egypt." Ny tanàna dia nivoatra hatramin'ny 1853 noho ny fanentanana ny fanamboaran-dalamby ho any amin'ilay faritra. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary fikosoham-batana any Carbondale, IL.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana May-Oktobra